Maxaa Lagu Xasuusta Ragii Xilalka soo qabtay Xiligi Shariifka Ilaa Hada « AYAAMO TV
Maxaa Lagu Xasuusta Ragii Xilalka soo qabtay Xiligi Shariifka Ilaa Hada
958 Views Date March 12th, 2014 time 9:54 pm
Halkaan waxaan idiin kuugu soo gudbin doono Madaxdi ugu danbeeyay ee dalka xiliga uu madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheikh Axmed Iyo waliba wax qabadkoodi war baxin kooban.
Sheikh Shariif Sheikh Axmed
Ugu horeyn Madaxweynahi Hore dalka Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa lagu xasuusan doono eex iyo qabyaalad maasuq maasuq iyo nin jeclaaysi.
Shariif sheikh axmed waxaa uu jufo jufo u kala saaray beesha uu ka dhashay ee mudulood asaga oo jufada uu ka dhashay ee agoon yar siin jiray saamiga soo gaara beesha Mudulood taasina waa nasiib daro soo wajahday intii madaxda ka ahaa dalka waxaa aay ka mid tahay asbaabaha uu dib ugu soo noqon waayay shariif axmed.
Shariif Xasan sheikh Aadan shariif Sakiin
Shariif Sakiin Gudoomiyahi Barlamanka Soomaaliya, in muda ahna soo haayay xilkaasi wa ganacsade qibrad badan aan u laheyn hanaanka dowlad nimo waxaa uu astaan u noqday maasuq maasuq baahsan oo fashilyay dowladdi shariif axmed waxaa uu soomaaliya maasuq maasuqa ka galiyay kaalinta koowaad.
Ilaa hada kama marno siyaasada dalka wuxuu mushaaraad ka qaata safiiro uu horay u geeyay dalal dhowr sida turiga waana nin dhan waliba ka ciyaara wuxuu ahaa muqalas weyn oo ka ganacsada dadka xiliga uu gudoomiyaha barlamaanka ahaa wuxuu lacaga badan ka qaadan jiray dadka doonaya in aay dalalka soomaaliya dhaama .
Wuxuu wasiiir waliba raacsiin jiray safar waliba ilaa sadax ruux oo laba asaga ka mid ah xagiisa ka socda si wasiirkaasi socdaalka uu ku tagayo dalalka caalamka loogu maasuq maasuqin.
Shariif xasan qormadiisa halkaan laguma soo koobi karo
Cumur C/rashiid Cali Sharma,arke
Cumar waxaa dhalay Madaxweynahi Hore Dalka allaha u naxariste C/rashiid Cali Sharma,arke cumar ma aheyn nin fahmi kara baahidi xiligaasi dalka ka tagneed wuxuu ahaa nin aan daruuf waligii arkin kuna ma ahaynin nin aqoon dheeri ah u leh aqabadahi xiligaasi jiray.
Wuxuu ahaa nin markii uu saxafada u yeera iska iloowi jiray waxaa dhacday in maalin intuu u yeero saxaafada intii aay dibada ku sugaysay loo sheegay in cumar Geym Ciyaarayo taasi oo aad ugu yaabisay wariyaasha warka ka sugaayay xiligaasi.
Qormadiisa halkaan laguma soo koobi karo
R/wasaarahi ugu shacbiyada Badnaa Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo wuxuu aha qorax ama hilaac bilig u yiri umada soomaaliyeed, xili aay u baahneed wuxuu ahaa R/wasaaraha kaliya ee wax qabadkiisa banaanka yimid ma aheyn nin kala dhantaala dhaqaalaha dalka loo soo dhiiba.
Wuxuu soo nooleeyay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed, oo uu ku baxiyay qarashadka ugu badan si aay ula dagalamaan cadowga shabaabka oo xiligaasi heestay magaalada muqdisho boqolkiiba 90 .
Farmaajo waa helyeey taarikh mugweyn ku reebay umada soomaaliyeed, Farmaajo wuxuu xilka iska casilay mudo kooban markii uu haayay ka dib markii aay caqabado badan soo wajaheen .
Farmaajo Taarikhdiisa halkaan kuma soo koobi karno balse dib kala soco insh,alah
C/weli Cali Gaas
Gaas waxaa lagu xasuusta in uu ka mid ahaa rag badan oo damac waalan ka galay in aay iibsadaan bada soomaaliya, wuxuu dhaqaale badan ka qaatay dalka Kenya six ad beened badeena loogu sameeyo ka dibna loo maroorsado wuxuu ahaa nin aad u sal fudud Go,aankiisana jilacsan yahay.
Wuxuu ahaa nin daaha hoostiisa aay ka maamusho marwadiisa Hodan Ciise mana aheyn nin galigiis go,aan gaari kara sida laga soo xigtay saaxibo ku dhow
Taarikhdiisa faaah faahsan goordhow insha,alah
Xasan sheikh Maxamuud Gar guurte
Xasan Waa Madaxweynaha dalka wuxuu qabtay wax badan waloow soori qaaday marki danbe soomaalida waxaay tiraahda nin aay soori qaaday iyo nin aay seefi qaaday yaa daran.
Xasan sheikh wuxuu soo nooleeyay xariirki beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya, waloow markii danbe dhaqaale maroorsi uu isku dayay darted uu ku waayay saaxiibo badan oo u sameeyay dowladiisa.
Waxaa uu aad ugu fashilmay Kooxda daaha gadashiisa ka hagta ee Damjadiid oo danaha dalka ka door biday danaha shisheeya ayaga fashil badan dalka usoo jiidaay
Xasan sheikh wuxuu heesta weli fursad waxaana laga dhowraya wax qabad insh,alah
Cabdi saacid Sherdoon
Mudane Saaciid waxaa lagu xasuusta Hurdo badan iyo caajis wuxuu ahaa nin inta badan kalagiis socod ah wasiirada xukumudiisana kama amar qaadan jirin.
Wuxuu ahaa nin af macaan balse dadaalkiisa kooban yahay nasiib daro waqtigii uu heestay kama uusan fa,idaysan oo waxaa qaaday seefta halista badan ee Damjadiid.
Dib kala soco warbaxin saacid
Warbaxintaan waxaay gaar u tahay ayaamo.com
C/weli Sheikh AXmed
C/weli waa nin cusub weli wax la taaban karo ma qaban waloow uu sabab u ahaa is badalka lagu sameeyay hayadaha amniga.
Waxaa la sheega y in uu aad u dhaliilsan yahay raga hada amniga shaqada ku leh wuxuu iska fogeeya in asaga lug ku leeyahay wax qabad la,aanta jirta
Weli waa cusub yahay waxaa loogu fadhiya wax qabad insh,alah
Maxmed Sheikh Cismaan Juweeri
Gudoomiyaha barlamaanka soomaaliya, waxaa lagu xasuusan doona af gaabi dhex dhexaad nimo iyo in uusan ka gudbnin shaqadi loo igmaday.
Marka loo eega gudoomiyaashi soo maray barlamaaka soomaaliya, waa ninka ugu macquulsan run ahaanti in kasto dhaliil soomaalia laga waaayin hadana wuxuu dhaama ragii horay usoo maray dalka.
Juweeri waxaa la shega in kooxda damjadiid marin ugu dhigteen ridisti xukumadi saacid oo loo maray maasuq maasuq,
Gudoomiyaha hada waxaa laga suga wax qabad iyo dadaal maadama waqti fiican heesto wli
Warbaxintaan waxaay gaar u tahay ayaamo.com walaal hada doonayso xigo hanaga xadin